စိတ်ကူးတေးသီ: ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ဖမ်းဆီးခံရပြန်ပြီ
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ဖမ်းဆီးခံရပြန်ပြီ
တမြို့တည်းနေ သူငယ်ချင်းတဦးက ဖုန်းဆက်ပြောသည့်အတွက်
လတ်တလော လောင်စာဆီဈေးကြောင့် အခြေအနေတွေ ရှုတ်ထွေးနေသည့်
ရန်ကုန်မြို့က နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာသည့် ညတွင်းချင်း အဖမ်းအဆီးသတင်း
ဖုန်းပြောနေစဉ်မှာပင် အော်စလိုမှာနေသည့် ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်
တဦးဖြစ်သည့် ကိုမိုးမောင်မောင်ဆီမှ အီးမေးလ်ဝင်လာလေသည်။ ( အီးမေးကို
မူရင်းအတိုင်း ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ )
ရန်ကုန်တွင် သြဂုတ်လ ၂၁ ရက် ညသန်းကောင်၌ စတင် အဖမ်းခံရသူများမှာ
၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် ကိုဂျင်မီ၊ ကိုပြုံးချို၊ ကိုမြအေး နှင့်
ကိုအံ့ဘွယ်ကျော်တို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နောက်ဆက်တွဲ မေးမြန်းစုံစမ်းချက်များအရ မင်းကိုနိုင်နှင့် ကိုကိုကြီးတို့ကို
လည်း ဖမ်းဆီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း အတည်မပြုနိုင်သေးသည့် သတင်းများ
မင်းကိုနိုင်ကို ကျိုက္ကဆံ စစ်ကြောရေးစခန်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း
ကိုမိုးမောင်မောင်ထံမှ ၀င်လာသည့် မူရင်းစာ..
The bastard SPDC arrested the48888students' leaders, Mya Aye,
Jimmy,Pyone Chi and Ant Bwe Kyaw in this midnigh.
We must prepare for the international's concern to realease immidiately
these students' leader and promoting democratic rights in Burma.
We should remember why we can live peacefully in other lands.
Let's show our unity and red blood for our country together!
with revolutionary truth
Moe Mg Mg
Posted by wai lin Tun at 9:20 PM Labels: သတင်း